ऋतिक र टाइगरको ‘वार’ले १० दिनमै २४४ करोड कमायो ! - Birgunj Sanjalऋतिक र टाइगरको ‘वार’ले १० दिनमै २४४ करोड कमायो ! - Birgunj Sanjalऋतिक र टाइगरको ‘वार’ले १० दिनमै २४४ करोड कमायो ! - Birgunj Sanjal
ऋतिक र टाइगरको ‘वार’ले १० दिनमै २४४ करोड कमायो !
२५ आश्विन २०७६, शनिबार १४:४३
काठमाडौं । अभिनेता ऋतिक रोशन र टाइगर श्रफको फिल्म ‘वार’ले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट कमाई गरिरहेको छ । यो फिल्मले रिलिजमा आएको एक सातामै २०० करोड भन्दा बढीको ब्यापार गरिसकेको थियो । अब यो फिल्मले केही दिनमै २५० करोड भन्दा बढी बक्स अफिसमा कलेक्शन गर्ने बताइएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार यो फिल्मले रिलिजमा आएको १० औं दिन ६.५० करोडको कलेक्शन गरेको थियो । यस हिसाबले अहिलेसम्म यो फिल्मले २४४.८५ करोड कलेक्शन गरिसकेको छ । यो साता ११ अक्टोवरका दिन प्रियंका चोपडा र फरहान अख्तारको फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ रिलिजमा आएको थियो, तर यो फिल्मले ‘वार’को ब्यापारमा खासै असर गरेको छैन ।
ट्रेड एनालिस्ट राज बंसलका अनुसार यो फिल्मले सरिलिजमा आएको ९ औं दिन ९.५ करोडको कलेक्शन गरेको थियो । वास्तवमा भन्नुपर्दा ‘वार’ले रिलिजमा आएको तीन दिनमै १०० करोडको ब्यापा गरेको थियो । त्यस्तै चौथो दिन १२५ करोड, पाँचौं दिन १५० करोड, छैटौं दिन १७५ करोड र सातौं दिन २०० करोडको ब्यापार गरेको थियो । त्यस्तै आठौं दिन २२५ करोडको कलेक्शन गर्नै रेकर्ड कायम गरेको थियो ।
यो साता पनि ‘वार’ले राम्रो कमाई गर्नसक्नेछ । फिल्मले यो साता ३० करोड भन्दा बढीको ब्यापार गर्न सक्नेछ । फिल्मलाई सिद्धार्थ आनंदले निर्देशन गरेका हुन् । ऋतिक र टाइगरको एक्शन फिल्म वारलाई दर्शकहरुले खुब रुचाइरहेका छन् । फिल्ममा ऋतिक र टाइगरका अलवा वाणी कपुर पनि मुख्य भूमिकामा छन् ।
यो फिल्मले पहिलो दिन ५३.३५ करोडको बक्स अफिस कलेक्शन गर्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो ।